Qorshaynta dhismaha Xarun caafimad Hoy iyo Waxbarasho – Abschir Hassan Foundation
Qorshaynta dhismaha Xarun caafimad Hoy iyo Waxbarasho
Waxan u Istaagnay, in aan caawino Qoysaska caruurta disabled haysta. Baarista, ogaanshaha, jirada caruurta haysa, iyo Barashada qaabka loo xanaaneyo, medical and nursing care.
Waxan qorshaynaynaa, dhisida Hoy, Xarun waxbarasho iyo therapeutic, Dhalaanka iyo Dayarta disabled ah, waxanka hawl gali doona Dawlada Puntland ee in central Somalia. Waxa naloo iclaamiyay dhul baaxad leh oo volunteer, mutadawacnimo nalaku siinayo, madama Shacabku kadaalay, balan qaadyo aan Miro dhalin iyo Magacooda oo lagu adeegto, Organizations Gudaha iyo Dibadaba kasocda, corruption Africa naafeeyay, sidaa darted Niyadooda wax logu dhimay,waxa lagama maarmaan ah ,in aan concrete presentation ula tagno, sidoo kale.
In aan Soamlia ula duulo, realistic and implementable projects, sida awgeed waxan jeclaan lahaa, dhamadka 2017/ bilawga 2018 in aan Puntland Gaaro, si aan uga miro dhaliyo projects Hirgalintooda. Wixi kale oo information ah dabcan waxad kala socon kartaa Homepage. Sidoo kale waxad Akhbaaraha iyo Suàalaha noogu reebi kartaa contact